mfe nzọụkwụ naghachi formatted SD kaadị
Banyere formatted SD kaadị
SD kaadị ndị dị ala na siri ebe nchekwa ụgbọala nke na-n'aka na data nke onye ọrụ na-anọgide na otu ebe na nke anụ ahụ nchekwa nwekwara adịghị nnukwu mgbe niile. Ị SD kaadị na-ezo aka a nchekwa nke e ehichapu mere na ọ ike ga-enweta. Ọ bụ ọsọ Ọkpụkpọ SD kaadị karịsịa mgbe ha na-emerụ ma ọ bụ na-abụghị ọtọ.
Bụ furu efu data recoverable si formatted kaadị?
E nwere ọtụtụ iri puku nke omume na ike-arụnyere jide n'aka na data si formatted SD kaadị na-abụghị nanị natara ma onye ọrụ nwekwara ike ịhụ faịlụ na nọ ugbu na-eme ka mgbake dị ka kwa oke. Ya mere azịza nke doro ajụjụ bụ ịrụ ụka adịghị ee ma naanị mgbe otu n'ime ndị kasị mma na ndị ọkaibe omume a na-eji jide n'aka na data s natara na-enweghị ihe ọ bụla ọzọ oge. Ọ bụkwa na-ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na data nyefe ma ọ bụ mgbake ga-rụrụ site a na omume nke ndị nile dị otú atụmatụ nke a pụrụ iji jide n'aka na ihe omume na-arụ ọrụ dị egwu n'ụzọ. Ọ bụkwa na-ahụ kwuru na SD kaadị mgbake omume ga-eji na-eburu n'uche na n'ozuzu mgbake ikike na-arụ ọrụ nrụgide dị ka ọtụtụ ndị mgbake software omume ida mgbe usoro akpọ onye ahụ ibu na ha otú mere ndị kasị mma a ga-họọrọ na-eme ka n'aka na nsonaazụ kacha mma na-enwetara na ọ bụrụ na ọ na-adịghị mere mgbe ahụ onye ọrụ ekwesịghị ịtụ anya nke furu efu data ga-gbakee. Na akụkụ ikpeazụ nke a nkuzi ga-emekwa ka n'aka na onye ọrụ osịmde iwebata ka otu nke kasị mma na ọkaibe omume na a pụrụ iji jide n'aka na needful na-eme. Ọ na-na--ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịkwara ime ka n'aka na Filiks ga-kwuru na-etinyere na-enweghị awụgharị ọ bụla nzọụkwụ dị nnọọ iji jide n'aka na arụpụta ihe kasị mma na-enwetara nke ga-maa iduga onye ọrụ kwupụta mgbake nke data na a Ị SD kaadị ma ọ bụ ihe ọ bụla na ọnọdụ ma eleghị anya.
Weghachite data si SD na kaadị 3 mfe nzọụkwụ
Nlaghachie data nke SD kaadị mgbe otú mfe tupu usoro ihe omume Wondershare Data Recovery na oru. The onwe triggering na ọkaibe omume na-eme ka n'aka na kasị mma na ndị ọkaibe results na-enwetara enweghị ihe ọ bụla na-egbu oge na onye ọrụ na-ọkọkpọhi inyeaka nke data mgbake enweghị ihe ọ bụla nke na nsogbu. The Wondershare mmepe otu na-emekwa ka n'aka na ọ kasị mma na ndị ọkaibe Filiks na-adiaha mgbe emelite omume otú ọ na-aghọ a oke nke n'ọgbọ ọ bụla na mgbe na-ochie dị ka ọtụtụ ndị mgbake omume na-eme. Wondershare Data Recovery Bụ otu n'ime ndị omume nke na-ahụ na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma na ndị kasị elu results enweghị a na-egbu oge nke otu abụọ na maka otu ihe ahụ ọ bụkwa na-ahụ kwuru na onye ọrụ nwere ike inweta ihe kasị mma enweghị ihe ọ bụla nke na nsogbu . Usoro na-agbakwunyere na ihe omume e kọwara dị ka n'okpuru:
1. Onye ọrụ kwesịrị ka ahu nagide URL http://www.wondershare.com/data-recovery/guide.html iji jide n'aka na-ekpe ikpe version nke usoro ihe omume ebudatara, arụnyere na ulo oru na na usoro:
2. Ozugbo usoro ihe omume na-ebupụta ọkụkụ ọzọ button ga-eduga onye ọrụ kwupụta ọzọ na windo na-ga-eme ka n'aka na faịlụ ụdị na bụ na-ahụ bụ họrọ mere na usoro ihe omume anya naanị n'ihi na ụdị faịlụ naanị na usoro-aghọ ngwa ngwa:
3. The faịlụ ọnọdụ bụ mgbe ahụ na-kpọmkwem na-eme ka n'aka na needful a mere na ọzọ usoro ihe omume lee anya n'ime kpọmkwem ọnọdụ iji jide n'aka na ihe bụ nsogbu kpebiri na usoro-aghọ ngwa:
4. The ọrụ ke akpatre nzọụkwụ mkpa ijide n'aka na na faịlụ na-natara mgbe Doppler-ele ya anya anya na ndị na-achọrọ site na onye ọrụ na-enyocha na naghachi button na-kụrụ iji jide n'aka na usoro na-okokụre:
Akwado SD kaadị ụdị nke a usoro
Nke a software omume na-eme ka n'aka na ndị nile SD kaadị ụdị na-akwado nke na-agụnye xd kaadị, SDXC kaadị, Micro SD kaadị na ndepụta na-aga na na na. Ọ bụ ọrụ ike na irè nke ìgwè ndị Wondershare mmepe nke na-n'aka na nnukwu kaadị format na-abụghị nanị na-akwado ma onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma na ndị ọkaibe ọrụ na mmekọrita a usoro.
Esi nweta SD kaadị na-enweghị formatting?
Ndị kasị mma na nanị ụzọ jide n'aka na needful bụ DOE na-site n'ịhụ na mgbake software na-eji na nke a na-agaghị nanị na-arụpụta ihe kasị mma ma ga-emekwa ka n'aka na ọdịnaya nke kaadị na-mgbe egbughị. Ọtụtụ n'ime ndị ọrụ ndị nke echiche bụ na rụrụ arụ SD kaadị pụtara na data na-niile na-arahụ na efu ma n'ezie ọ bụghị bụrụ na data bụ maa recoverable ma ọ bụrụ na kasị mma na ndị ọkaibe ọrụ na-eji nke a . Ọ na-na--ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na usoro ihe omume nke e họọrọ na nke a bụghị naanị ọkọkpọhi kasị mma n'ihi ma na-emekwa ka n'aka na usoro ihe omume dị irè na-achọ faịlụ na ndị ọzọ na-akwado format ụdị na onye ọrụ ọchịchọ. The Wondershare Data Recovery na-emekwa ka n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma na ọkaibe ọrụ na nke a ọ na-mgbe nsogbu na mmekọrita na kaadị ebe nchekwa mgbake. The emerụ SD kaadị bụ ya mere recoverable site n'iji nke kasị mma omume na ọ bụ ya mere ukwuu tụrụ aro iji jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi nsonaazụ kacha mma enweghị ihe ọ bụla na-egbu oge.
Nke dị mma - 7 data kaadị mgbake VS Wondershare Data Recovery
2 ụzọ naghachi SD kaadị na PC / Mac ọsọ ọsọ na mfe
Olee otú Naghachi Data si Max OS X El Capitan 10,11
Olee otú Naghachi Lost ma ọ bụ ehichapụ Data si verbatim Store
Olee otú Naghachi ehichapụ nchekwa si mpụga ike mbanye
> Resource> Naghachi> 3 mfe nzọụkwụ naghachi formatted SD kaadị